PPT - Vol. 1 PowerPoint Presentation - ID:3351639
Vol. 1PowerPoint Presentation
<iframe src="https://www.slideserve.com/embed/3351639" width="600" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe>
Vol. 1 - PowerPoint PPT Presentation
J ESOSY. HAFATR’I. ho an’ny. Andro farany. Vol. 1. “ Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao.” (Mat. 28:20).
PowerPoint Slideshow about 'Vol. 1' - mercer
“Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao.” (Mat. 28:20)
FIPARITAHAN’NY FINOANA NY HERY TSY TAKA-MASO, NY FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
Afaka miresaka amin’ny maty ve isika? FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
Mahafantatra ny zavatra mitranga eto amin’izao tontolo izao ve izy ireny?
Webster Dictionary FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ny FIANTSOANA FANAHY dia ny fiheverana fa ireo tranga ahitana fanelanelanana dia vokatry ny fanahin’ireo maty.”
Spiritualist Manual FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ny Fiantsoana fanahy dia siansa, filôzofia, ary fivavahana ao anatin’ny fiainana mitohy.”
Romana 6:23 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Fa fahafatesana no tambin’ny ota…”
Mpitoriteny 9:5 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Fa fantatry ny velona fa ho faty izy; fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona.”
Genesisy 3:1 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra
izay nataon’i Jehovah
Andriamanitra. Ary hoy izy
…‘Hanky! Efa nataon’Andriamanitra hoe: Aza ihinanareo ny hazo rehetra amin’ny saha?’”
Genesisy 3:2, 3 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Fa hoy ravehivavy tamin’ny menarana:
Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: …
... Aza hihinananareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo.”
Genesisy 3:4, 5 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“… Tsy ho faty tsy akory ianareo;
fa fantatr’Andriamanitra fa amin’izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy.”
E. W. Sprage FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ny fiantsoana fanahy dia milaza fa
mahafantatra zavatra betsaka noho ny olona velona ny olona maty, ary efa niteny tamin’ny vehivavy ny menarana hoe tsy ho faty tsy akory ianareo, Gen. 3:4…
… Hitantsika ao anatin’izany fa milaza ny marina ny devoly saingy diso kosa ny Tompo.”
Norman Vincent Peale FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ireo andaniny roa amin’ny fahafatesana dia velona ao anatin’ny fifandraisana tsy mety tapaka... Ny zava-drehetra dia manaporofo ny fitohizan’ny fahaveloman’ireo hava-malalantsika...
… Ho tafaray amin’izy ireo isika, kanefa mandrapahatongan’izany fotoana izany dia manohy ny firahalahiana any amin’ireo izay mitoetra ao anatin’ny tontolon’ny fanahy isika.”
Genesisy 2:7 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ary vovo-tany no namoronan’i Jehovah Andriamanitra ny olona...”
“Ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony; dia tonga olombelona Izy.”
Mpitoriteny 12:7 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Koa ny vovoka dia hiverina amin’ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin’Andriamanitra izay nanome iny.”
olombelona - FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
Joba 27:3 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Fa mbola ato anatiko ihany ny aiko, ary am-bavoroko ny fanahin’
Salamo 104:29 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Alainao indray ny ainy, dia maty izy ka mody any amin’ny vovoka nanalana azy.”
Jakoba 2:26 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa.”
Ezekiela 18:4 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Indro Ahy ny fanahy rehetra: toy ny fanahin’ny ray, dia toy izany koa ny fanahin’ny zanany; samy Ahy ireny; ny fanahy izay manota no ho faty.”
“Fa fantatry ny velona fa ho faty izy; fa ny maty
kosa tsy mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-pitia intsony izy; fa hadino ny fahatsiarovana azy.”
Salamo 115:17 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ny maty tsy mba hidera an’i Jehovah. Na izay midina any amin’ny mangingina.”
Asa 2:29, 34 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ry rahalahy, aoka aho mba hilaza aminareo
marimarina ny amin’i Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrak’androany …
… Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra”
II Timoty 4:7, 8 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka
ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana,
… izay homen’ny Tompo,
Mpitsara marina, ho ahy amin’izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’izay rehetra tia ny fisehoany koa.”
I Korintiana 15:51, 52 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Indro, zava-miafina no ambarako aminareo:
tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety, toy ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny tompetra farany, dia hovana isika rehetra …
…fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty
hatsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana. Fa ity mety lò ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalòvana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana.”
“Fa ity mety lò ity dia tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalòvana, ary
ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsi-fahalòvana ity mety maty ity,…
… ary mitafy ny tsi-fahafatesana ity mety maty ity,
dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: Ny fahafatesana noresena ka levona.”
I Petera 5:4 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ary rehefa miseho ny Lohan’ny mpiandry, dia hahazo ny satroboninahitra izay tsy mety simba ianareo.”
Jaona 5:28, 29 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Aza gaga amin’izany; fa
avy ny andro izay handrenesan’ny olona rehetra any am-pasana ny feony; dia hivoaka izy: izay nanao tsara, …
… dia ho any amin’ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin’ny fitsanganana ho fahamelohana.”
Daniela 12:2 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Ary maro amin’izay matory ao
amin’ny vovoky ny tany ho hifoha: ny sasany ho amin’ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin’ny henatra sy ny latsa mandrakizay.”
I Korintiana 15:16-18 FILALAOVANA ODY, ARY NY FIFAMATORANA AMIN’I SATANA
“Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia
Kristy koa aza dia tsy natsangana; ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao anatin’ny fahotanareo ihany ianareo!…
…dia very koa izay efa nodimandry ao amin’i Kristy.”
Isaorana Andriamanitra noho ny nandresen’i Jesosy ny fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
Jaona 11:11, 14 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“...Matory Lazarosy sakaizantsika; fa handeha hamoha azy Aho … Ary tamin’izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe: Maty Lazarosy.’”
Salamo 127:2 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“…Izany anefa dia omeny ihany ho an’ny malalany na dia matory aza izy.”
Lioka 23:43 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any am-paradisa.’”
Jaona 20:17 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“…Aza manendry Ahy; fa tsy mbola niakatra tany amin’ny Ray Aho…”
William E. Gladstone fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
Watchman, April 1940
“Tao anatin’ireo taonjato voalohany no nidiran’ny foto-pampianarana jentilisa momba ny tsy fahafatesan’ny fanahin’olombelona, ho ao anatin’ny fiangonana.”
Genesisy 3:4 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Ary hoy ny menarana tamin-dravehivavy: Tsy ho faty tsy akory ianareo.”
The Progressive Thinker, fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!May 18, 1929
“Ny fiantsoana fanahy no hafatr’Andriamanitra ho an’ireo mety maty, izay milaza hoe ‘tsy misy ny fahafatesana,’ ary izay rehetra maty dia mbola velona ihany, …
ary misy fanantenana any amin’ilay fiainana any ankoatra, ho an’ireo tena mpanota be indrindra.”
Hebreo 9:27 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Ary tahaka ny nandendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana.”
Encyclopedia Britannica fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!,
Vol. 25, p. 705
“Miparitaka tahaka ny areti-mifindra ny hetsika fiantsoana fanahy.”
Encyclopedia Americana, fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Miparitaka ny onjan’ny fahalianana
amin’ny fiantsoana fanahy...ary izay rehetra mandray anjara amin’izany dia mahazo vola maherin’ny tapitrisa.”
Apokalypsy 12:9 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Satana, izay mamitaka izao tontolo izao.”
Ezekiela 28:15 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Tsy nanan-tsiny ianao tamin’ny nalehanao, hatramin’ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka taminao.”
Isaia 14:13, 14 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Ary ianao efa nanao anakampo hoe:
Any an-danitra no hiakarako, ary ambonin’ny kintan’Andriamanitra ho hanandratako ny seza fiandianako;
Dia hipetraka eo an-tendrombohitra
fivoriana any am-parany avaratra aho; hiakatra ho any ambonin’ny havoan’ny rahona aho ka ho tahaka ny Avo Indrindra.”
Apokalypsy 12:7, 9 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Ary nisy ady tany an-danitra:
Mikaela sy ny anjeliny niady tamin’ilay dragona; ary ilay dragona mbamin’ny anjeliny kosa dia niady,…
…nefa tsy naharesy,
sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona, …
… dia ilay menarana ela, izay atao hoe
Devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao; dia nazera tamin’ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy.”
Apokalypsy 12:12 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“...Loza ho an’ny tany sy ny ranomasina!
Fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantatsika fa kely sisa ny androny.”
II Korintiana 11:14 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin’ny mazava.”
Efesiana 6:12 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Fa isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà,
fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, …
… dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra.”
Apokalypsy 16:14 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Fa fanahin’ny demonia ireo ka manao
famantarana sady mankany amin’ny mpanjaka amin’izao tontolo izao, …
… mba hanangona ary ho amin’ny adin’ilay andro lehiben’Andriamanitra Tsitoha.”
Levitikosy 20:6, 27 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Ary ny olona izay mivily hanaraka izay manao ary ho tsindrian-javatra na izay mpanao hatsarana,
hijangajangana hanaraka azy, dia hanandrina izany olona izany ny Tavako, ka hofongorako tsy ho amin’ny fireneny izy…
Ary na lehilahy na vehivavy izay manao azy ho tsindrian-javatra na
izay mpanao hatsarana dia hatao maty tokoa: hitora-bato ary ny olona; ny ràny dia ho aminy ihany.”
I Samoela 28:11, 13 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Iza no hampiakariko ho eto aminao?
Ary hoy izy: Samoela no ampiakaro ho ety amiko… ‘ Fa inona no hitanao?’ Ary hoy ravehivavy tamin’i Saoly: Andriamanitra miakatra avy amin’ny tany no hitako.”
Signs of the Times, fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!May 10, 1967
“Ry Devoly andrianan’ny demonia,
mangataka anao hihaino ny vavaka asandratro aho... Tahio ny mpanomponao amin’ny asa ataony eo anatrehanao... omeo hery izy ahafahany miaro anao...
…mba handrenesan’ireo mpihaino
rehetra hoe devoly mihaino sy mamaly vavaka ianao.”
I Tesaloniana 4:13 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo,
ry rahalahy, ny amin’izay modi-mandry, mba tsy halahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana.”
I Tesaloniana 4:16,17 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
“Fa ny tenan’ny Tompo no
hidina avy any an-danitra amin’ny fiantsoana sy ny feon’ny arikanjely ary ny trompetran’Andriamanitra, ka izay maty ao amin’i Kristy no hitsangana aloha;
1 Thessalonians 4:16,17 fahafatesana. Tsy nahatazona Azy ny fasana!
… Ary rehefa afaka izany, dia
isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka Aminy ho eny amin’ny rahona hitsena ny Tompo any amin’ny habakabaka; dia ho any amin’ny Tompo mandrakariva isika.”